नेपालमा आज एकैदिन १०९६ कोरोना संक्रमित थपिए, कुन ठाउमा कति (पुरा विवरण) - Nepali in Australia
April 18, 2021 autherLeaveaComment on नेपालमा आज एकैदिन १०९६ कोरोना संक्रमित थपिए, कुन ठाउमा कति (पुरा विवरण)
नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ ।पछिल्लो २४ घण्टामा थप १०९६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए।
गौतमका अनुसार ५०८४ पिसिआर परीक्षणबाट १०१५ र ६९९ ए’न्टीजेनबाट ८१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत असाजे यता नयाँ संक्रमितको संख्या एकहजार ना’घेको यो पहिलो पटक हो। नेपालमा अहिले संक्रमण दर उच्च रहेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा सं’क्रमणदर १८ प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सर्वाधिक ४३५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसमध्ये ३२६ जना काठमाडौँमा, ६४ जना ललितपुर तथा ४५ जना भक्तपुरका रहेका छन् । पछिल्लो २४ घन्टामा २६२ जना सं’क्रमणमुक्त भएका छन् ।गौतमका अनुसार पछिल्लो एक सातामा १९५४२ परीक्षण भएकोमा ३१०९ संक्रमित फेला परेका छन्।
यस्तै यो साता ८५३ जना सं’क्रमणमुक्त भएका छन्। प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. गौतमले कोरोनाबारे बोल्ने ज’नस्वास्थ्य विद्हरुलाई पनि ज’थाभावी नबोल्न भनेका छन्। उनले नेपालमा हरेक उमेर स’मूह कोरोनाको जो’खिममा रहेको भन्दै कुनै एक समूह अ’धिक जो’खिममा छ भनेर नबोल्न उनले निर्देशन दिएका हुन्। यसअघि जनस्वास्थ्य वि’द्हरुले बालबालिका अ’धिक जो’खिम रहेको बताएका थिए।
काठमाडौ उपत्यका बासीलाई फेरि आयो अत्यन्तै दु: खद खबर ! अवश्य पढ्नुहोला !